Indlela yefilosofi kwi-Divine Comedy, uDante kunye nentetho yakhe enzulu | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Uvavanyo, iintlobo, Iincwadi, Inoveli
I-oyile nguDante Alighieri, umbhali we-Divine Comedy.
Uhlobo oluBalaseleyo lukaThixo Ngumsebenzi obubhenca ngokucacileyo ubu-ethe bomntu, ukuqhekeka kwayo, yonke into ebambelela kubuntu bayo obufutshane. Nangona kunjalo, kwaye ngokufanayo, ikwabonisa oko kumsindisa kuye, indawo yokomoya ebotshelelwe kuThixo emvumela ukuba azibuyise kwaye oyise ukungalunganga. Ngokuqinisekileyo, umsebenzi ekufuneka ubekhona phakathi kwethu Uluhlu lweencwadi ekufuneka zifundwe.
UDante Alighieri wazikhupha ngokwakhe ukuze avelise owona msebenzi wakhe mkhulu; lo mbhalo-ngqangi, ngokungathandabuzekiyo, wavela ekufeni, kwi-catharsis, kumbhali wayo. Ngoku, ukucacisa oku ngokwembono yefilosofi ethe kratya, masiqhubeke nengxoxo elandelayo.
1 Imiba ephambili emsebenzini kaDante
2 Ifilosofi ngokwembono yokuziphatha kunye neyenkolo
3 Isiphelo, ke, kukuzihlambulula nokufikelela kuThixo.
Imiba ephambili emsebenzini kaDante
Kukho izinto eziphawula umsebenzi kaDante kwaye ezingenakuphikwa, aziyi kuqatshelwa. Ikamva lomntu ngamnye emhlabeni, linye. Ewe, kulo mbhali yonke into sele igqityiwe kubomi babo bahamba kule nqwelo moya. Inye, ngokokuma kweenkwenkwezi ngexesha lokuzalwa kwazo, ikamva lazo laphawulwa.
Yiyo loo nto ukwahlulwa kweenqwelomoya ezahlukeneyo kuba yinto yesibini yomsebenzi ka-Alighieri. KUNYEKule meko sithetha ngesihogo nezulu nangamanqanaba ahlukanisa umhlaba kunye nalapho umntu anokugqitha khona ukuba unqwenela ukucamagushela izono zakhe. Ewe, esi sithuba ayikho enye ngaphandle kweplgatory.
Ngoku, inqaku lesithathu eliphambili elinokungqinwa emsebenzini kaDante yile yenkululeko yamadoda. Ewe, elowo unokumiselwa kwangaphambili okuphawulwe ziinkwenkwezi, kodwa, nangayo loo nto, umntu angazityhila kwaye akhethe indlela ekufuneka ihanjiswe ngumphefumlo wakhe, ngaloo ndlela elungisa indawo apho umphefumlo wakhe uya kuhamba.
Ifilosofi ngokwembono yokuziphatha kunye neyenkolo
UDante, Kumsebenzi wakhe obhaliweyo ekuthinjweni, iphakamisa umbono onomdla wokuba yayiphi indlela yokuziphatha yamaxesha aphakathi eyayivela kwimbono yefilosofi. Umntla wonke umphefumlo kufuneka, ke, ukufikelela kwindawo ephawulwe ngokukhanya, indawo yokuphumla apho uMdali afumana wonke umntu ukuba anike ubulumko bokwenyani, ulwazi oluyinyani. Nangona kunjalo, ukufika apho kuthetha ukucoceka kokuba sele usaziwa.
Nabani na ozikhanyelayo kunye nayo yonke into eyinyama, kwaye efuna indlela eya kuThixo, edlula kuvavanyo olufunekayo kwinjongo enjalo, ukuba ufumene ukukhanya. Ewe, Imfundiso esisiseko yexesha eliphakathi icaciswe gca kwi-Divine Comedy, kwaye oku kuyomelezwa yimeko yezentlalo apho u-Alighieri kufuneka ukuba wayehlala khona. Enye into ebalulekileyo kukuba umyalezo walo msebenzi udlula ngaphaya kokulahlekelwa nguBeatriz wakhe othandekayo.
Isiphelo, ke, kukuzihlambulula nokufikelela kuThixo.
Ewe, ukuba kukho into enokubonakala ngokucacileyo kwimisebenzi kaDante, sisidingo sokucima izono ukuze umntu afezekise olona hlobo lululo kwaye akwazi ukucinga ngoThixo. Akukho mntu ukhululwayo kwiziphene, akukho mntu ungenakonakala, kukho omnye umyalezo ocacileyo emsebenzini. Umntu ngamnye uphantsi kovavanyo olunokumophula nangaliphi na ixesha, kodwa ucoceko luya kuhlala lukhona.
Umzobo kaDante Alighieri- Elsubte-raneo.co Ubomi, ngokwabo, luvavanyo, isanga apho umntu ecinga ukuba uzibona ngokwenyani, kodwa, enyanisweni, uyinkohliso. Lo ngomnye umyalezo ovela kuDante emsebenzini wakhe. Sibona kuphela ukuqikelela, imeko eyinyani, kodwa xa uMdali efikelelwa, emva kokuhlanjululwa, emva koko apho eyona nto ibalulekileyo inokuxatyiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Ifilosofi ekhoyo kwi-Divine Comedy
Ikota yoNcwadi yaseMadrid. Ukuhamba, iindlela kunye neendawo